यस्ता नयाँ नियम सहित ३३ देशबाट अमेरिका आउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो ! - ramechhapkhabar.com
यस्ता नयाँ नियम सहित ३३ देशबाट अमेरिका आउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो !
काठमाडौं, २७ कात्तिक ।
विश्वका विभिन्न ३३ देशबाट विदेशीहरुलाई अमेरिका आउन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । झण्डै डेढ बर्षदेखि यूके, साउथ अफ्रिका, ब्राजिल लगायत युरोपका गरी ३३ देशबाट अमेरिका आउनमा विदेशीहरुलाई रोक लगाइदै आएको थियो ।
त्यस्तै क्यानडा र मेक्सिकोको स्थलनाकाबाट पनि अमेरिका आउनमा रोक लगाइएको थियो । अब उक्त यात्रा प्रतिबन्ध हटेको छ । तर अमेरिका आउने सबैले विमान चढ्नु अगाडि कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण र तीनदिनभित्र कोरोना परीक्षण गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ । यो नियम अमेरिकी नागरिकका सन्दर्भमा पनि लागु हुनेछ भने भ्याक्सिन नलगाएका अमेरिकी नागरिकले थप कडा नियमको सामना गर्नुपर्नेछ ।
भ्याक्सिन लगाउने दर १० प्रतिशतभन्दा कम भएका झण्डै ५० वटा देशबाट अमेरिका आउनेहरुलाई भने भ्याक्सिन नलगाएको भएतापनि अमेरिका प्रवेश दिइनेछ । तर उनीहरुले अमेरिका आउनुभन्दा एकदिनभित्रको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ भने अमेरिका आइसकेपछि ७ दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्नेछ ।
पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएका अभिभावकसँग यात्रा नगरेका २ देखि १७ बर्षसम्मका यात्रुहरुले समेत एकदिनभित्रको नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उनीहरुले अमेरिका प्रवेश गरेको ६० दिनभित्र वा सीडीसीले तोकेको समयतालिकाभित्र पूर्णरुपमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले अमेरिका आएपछि तीनदेखि ५ दिनभित्र कोरोना परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेछ ।
भ्याक्सिन अनिवार्यको नियमले विदेशमा रहेका अमेरिकी कन्सुलेटहरुलाई भिजिटर भिसा जारी गर्नका लागि निषेध गर्दैन ।
तर भिसाको माग बढ्ने देखिएकाले भिसा अप्वाइन्टमेन्टमा ब्याकलग भने चर्को हुने देखिएको छ । विमानमा चढ्नुभन्दा अगाडि नै आप्रवासीहरुले पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएको र तीनदिनभित्र परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।
दुईडोज लगाउनुपर्ने भ्याक्सिनको दोश्रो डोज लगाएको १४ दिन पूरा भएपछि मात्र पूर्णरुपमा भ्याक्सिन लगाएको मानिनेछ । मिश्रित रुपमा भ्याक्सिन लगाएकाहरुलाई पनि मान्यता दिइनेछ । तर कम्तीमा १७ दिनको अन्तरमा लगाएको हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो डोज लगाएको १४ दिन पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाबिरुद्धको भारतीय भ्याक्सिन कोभ्याक्सिनलाई पनि आपतकालिन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएपछि नोभेम्बर ८ पछि अमेरिका आउँदा मान्यता पाउने भ्याक्सिनको संख्या ८ पुगेको छ ।
अमेरिका प्रवेशका लागि जोन्सन एण्ड जोन्सन, फाइजर, मोडेर्ना, आष्ट्राजेनेका, कोभिशिल्ड, भेरोसेल, साइनोभ्याकलाई मान्यता दिइएकोमा त्यसमा कोभ्याक्सिन थपिएको हो ।
अमेरिकाले अमेरिकामा एफडीएबाट स्वीकृत र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट स्वीकृत भ्याक्सिनलाईमात्र मान्यता दिने भएकाले चाइनिज भ्याक्सिनहरु साइनोफार्म (भेरोसेल) र साइनोभ्याक 9कोरोनाभ्याक) लगाएकाहरुले अमेरिका प्रवेश पाउनेछन् भने रसियन भ्याक्सिन स्पुत्निक भी लगाएकाहरुलाई भने अमेरिका प्रवेश दिइनेछैन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन साइनोफार्म अन्तरगतको भेरोसेल वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालमा वितरण गरिएको जोन्सन एण्ड जोन्सन र कोभिशिल्ड (आष्ट्राजेनेका) लगाएकाहरुले पनि अमेरिका प्रवेश गर्न पाउनेछन् । नेपालमा कोरोनाबिरुद्धको फाइजर भ्याक्सिन पनि आएको छ ।